Somali News 12.04.2020
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan haweeney da ’ahaan u dhaxeysa 41 ilaa 60, labo nin oo da'doodu u dhexeyso 61 ilaa 80, iyo nin ka weyn da'da 81. waxaa jira 88 qof oo isbitaal la dhigey oo la xiriira COVID 19 degmada Woodbury. Degmadu sidoo kale waxay leedahay 18.7% heer waxtar leh. Waxaa jira 88 qof oo la seexiyay COVID-19 oo ku yaal Degmada Woodbury.
South Dakota maanta waxay leedahay 1, 145 kiis oo cusub iyo 38 dhimasho dheeraad ah oo ka timi coronavirus wadar ahaan 83,348 xaaladood iyo 1,033 dhimasho. Waxaa jira 538 qof oo isbitaal la dhigay.
Nebraska waxaa ku jira kiisas dheeri ah 1 371 kiis iyo 42 dhimasho kale maanta. Gobolka waxaa soo maray in ka badan 134,000 oo xaaladood iyo 1,159 oo dhimasho ah. Waxaa jira 845 qof oo isbitaal la dhigay.
Tirada kiisaska coronavirus ayaa kusii kordhaya nidaamka xabsiga ee Nebraska. Lix xubnood oo shaqaale ah oo ku baahsan nidaamka gobolka ayaa baaray fayraska, Waaxda Adeegyada Asluubta ee Nebraska ayaa goor dambe oo khamiis ah ku sheegtay war-saxaafadeed. Taasi waa marka lagu daro saddex shaqaale kale oo cudurka qaba oo lagu dhawaaqay Arbacadii. Kiisaskii ugu dambeeyay waxay keeneysaa tirada shaqaalaha xabsiga Nebraska ee cudurka qaaday tan iyo markii uu faafka bilaabay ilaa 356. Ku dhowaad 700 oo maxaabiis ah ayaa laga helay fayraska dabayaaqadii usbuucii hore.
Dhimashada dhammaan saddexda gobol ee Siouxland sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 ayaa sii s
By Halima Osman • Dec 2, 2020
Dhimashada dhammaan saddexda gobol ee Siouxland sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 ayaa sii soconaya.
Nebraska waxay aragtay 62 intii lagu jiray 24 saacadood iyo 2,000 oo kiis oo dheeri ah.
Waxaa jirey ku dhowaad 1,300 kiisas dheeri ah oo ku yaal Koonfurta Dakota iyadoo gobolku ku sii dhowaanayo inuu gaaro calaamadda 1,000 ee dhimashada. Afartan iyo todobo qof oo kale ayaa u dhintey cudurka, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee dhimashada maalin keliya tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.